Imizekelo yesivakalisi? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Iiparmsms (ukusuka kwi-Greek-para-malunga, igama le-onyma) ngamagama afanayo ngokuvakalayo kwisandi ngokufana ngokupheleleyo okanye ngokuyinxalenye yeentsingiselo zawo. Abanye abafundi bacinga ngamagama anezinto ezizezinye zeenxalenye zentetho njengezihlanganisi, umzekelo, u-quot; umncinci - ulutsha,; & quot; umatshisi - marshy ,; nabanye. Abanye abafundi bathi igama leengcambu zoxinzelelo olunye, kunye, umzekelo, u-quot; Umcebisi-umcebisi uthi ;; Iiphinaim zahlukile kwizithetha-ntonye (amagama anentsingiselo efanayo) ngokuba zintsika-eyodwa, kunye kunye izithethantonye azikho, umzekelo. & quot; mde-mde (umntu) quot ;.
Isigama sokuqala-isincoko - inyani - ukuba, igama lesibini-isenzi - isenzo esingaziphathi kakuhle, igama lesithathu-isenzi - ukuhanjiswa - ukhenketho, igama lesine-isenzi umntu obhinqileyo - owasetyhini.
Umntu ongezelelweyo (umntu ekubhekiswa kuye le leta) -kongeza (umntu othetha le leta).
Inkohliso (imveliso) - inkohliso (into engekho mthethweni, bubuxoki).
I-puerpera (ibhinqa ngokuzala umntwana) ngumzali (umama).
Iserfman (umkhuseli we-serfdom) - iserf (umhluzi).
Intlungu (imvakalelo yokubandezeleka) sisifo (ukugula).
UGodina (ixesha lezehlo ezithile) - isikhumbuzo (ikhalenda yomhla waso nawuphi na umsitho).
Ukuzilawula (umbutho ozimeleyo wenkqubo ngaphakathi kwiqela) -ukulamlo (isenzo esingagunyaziswanga esingazifikeleliyo imigangatho).
Isikhumba (esenziwe ngesikhumba) - ulusu (luhambelana nolusu).
Ukungakhathali (akanoxanduva ngezenzo zabo) -ngaphenduleki (ongakwaziyo ukuphendula into).
Umntu ofayo (okhokelela ekufeni) -ngowokufa (umntu omiselwe ukufa).
Isinyithi (yenziwe ngentsimbi) - inefrive (inesinyithi ekwakhiweni kwayo).
Isikhalazo (uvelwano olunikhuthazayo) -nemfesane (ndizele yimfesane).
Isigulana (esigulayo) sibuhlungu (sihlaselwa sisifo).
Isithambiso (ukuba nephunga elimnandi) -nevumba (linazo izinto ezinephunga).
Kulungile (imiswe ngobubele)-isandi (sinokuthenjwa, sikumgangatho ophezulu).
Ukucekiseka - ukudela.
Nyani - Mow.
Ukopha - ukopha.
Iipherama ngamagama abhalwe ngokuchanekileyo, kodwa eneentsingiselo ezahlukeneyo. Umzekelo
Sijonga intsingiselo yamagama
Unobubele kunye nesandi
Intsingiselo yesi sibini
Kwaye jonga kuluhlu olufutshane lwamagama isigama kunye namagama ahambelana nentsingiselo.
Kufuneka zikhunjulwe, okanye kungcono uqale ucinge ngento ofuna ukuyibhala, emva koko ufake amagama kwisicatshulwa
Amaxesha amaninzi abantu benza iimpazamo zentetho bengayazi intsingiselo kunye nentsingiselo yeefonim. Banokuvakala, kwaye kubonakala ngathi, kodwa akukho nzima kwinto enye. Umzekelo, osetyenziselwa ukudida i-quot;umntu obekekileyo& quot; kunye & quot;ihashequot ;, kodwa ke ndiye ndakhumbula iintsingiselo zala magama ukuze ndingaphazami. I-Equestrian -Yiyo into edibene nehashe okanye yenza ntoni ngoncedo lwayo (umzekelo, amandla ehashe, umkhosi wamahashe). A ihashe -Yiyo into eyiye nehashe ngokwayo (inyama yamahashe, umsila wehashe), kwaye kwezinye iimeko yenye yeendawo zamagama kwi-botany (iimbotyi zamahashe).
Ke ngamagama athi;umdyarho& quot; (yintoni for umdyarho: ibhayisekile yokubaleka, ski yomdyarho) kunye ne-quot;hound& quot; (ihlala isilwanyana esisebenza ukuhambisa into: inja ebhedu).
Isetyhini - isetyhini
Umhlaza - iCrayfish
Kwaye malunga newaka elinjalo ngababini.
Igama lesiGrike Iimpawu . Ngamanye amagama, ibinzana ngalinye elinelizwi linentsingiselo yalo yamagama. Ukuba, singayazi eyona ntsingiselo yegama-parfuse, ukuyisebenzisa ngentetho, sinokwenza impazamo yokuxakaniseka - umxube wezinto ezithile, njengale:
Ndambatha umnqwazi (endaweni yokuba ndicaphuke; ndibeke kwi-quot;);
Kwiyadi kukho inja ekhohlakeleyo (endaweni yokuba i-quot; inomsindo wequ;).
Italente yakhe yolawulo yanconyelwa kakhulu yijaji (endaweni yokuba yiveni; yabaphathi bayo);
utyikityo - ukupeyinta;
isenzo - ukungaziphathi kakuhle;
umbaleki - uhambo
ezemfundo - ezemfundo;
ingwenya - ingwenya;
esebenzayo - esebenzayo
ukubeka (Ngubani?) - ukubeka (yintoni?);
ukuhlawula (ntoni?) - ukuhlawula (ngantoni?);
Inkwenkwe ihlawulwe hambo. Sikwixesha ihlawulwe kwizinto eziluncedo.
Isenzi cinga imicimbi quot; nika inqaku lesalathiso; ukwazisa ;. Ke ngoko, idityaniswa namagama:
amaxwebhu, ingxelo, idayagramu, iprojekthi, undwendwe, umdlalo ovela kumdlalo weqonga okanye umboniso bhanyabhanya, ngokwengqondo (ngoku)
Isenzi Isenzi предоставить kuthetha ukuba;; nika omnye umntu isicatshulwa; Idityaniswa nala magama alandelayo:
iholide, ukhetho, isikhundla, indawo, indawo, ulwazi, ityala, ithuba, igama, uncedo.
Andizukuhlala ndicinga ngokuba yintoni paronyms. Umbuzo wemizekelo, ke ndiya kubanika kuphela. Intsingiselo yegama ngalinye (ukuba ikho imfuneko) inokufumaneka kwizichazi magama ezichazayo:
Isingqisho - isingqisho.
Ishishini - ishishini.
Akukho magama maninzi kangako esiRashiya. Iiproimes ngamagama anopelo olufanayo okanye isandi, kunye neentsingiselo zineentsingiselo ezahluke ngokupheleleyo.
Nantsi eminye imizekelo embalwa yezibini zeendinyana:
KwisiRashiya, inani elikhulu kakhulu lesibizo - la magama athi, njengomthetho, eneengcambu ezifanayo, kunye nesandi esifanayo, ayahluka omnye komnye ngokuqala okanye kwiziimamva, kodwa umahluko ophambili phakathi kwezifanogama phakathi kwazo kukwintsingiselo yazo . Iiparmsms azinakutshintsha enye nenye. Ii-paronyms ziza kwiindidi ze-4: iphelele, ayiphelelanga, ayinamkhethe, inemeko ethile.
Ngamanye amaxesha, iiphonyms zilula ukudideka kunye, kwiimeko ezinzima unokujonga kwi-quot; Isichazi-magama solwimi lwaseRussia;
Iimpawu (ukusuka kwisiGreek para para, igama le-onyma) liqela elinomdla kakhulu lamagama, eyahlukileyo kwintsingiselo, kodwa iyafana kwisandi nopelo, yiyo loo nto abantu behlala bebabhidanisa.
U mzekelo Iimpawu zokubiza:
Ukungazi kukungazi, apho ukungazi komntu kukungafundeki, kwaye ukungazi kufundwe.
Ungasukeli ku-Un-Un-bhalisa, apho Unscript ichaphazelekile, Ungazikhupheli ngokusesikweni impendulo.
Ibhola yeBhola, apho iBala ngumsitho wentlalontle ngokudanisa, kunye nophawu lweBhola.
Ubhaliso Ubhaliso, apho ubhaliso luxwebhu oluqinisekisa ilungelo le into, kwaye lowo ubhalisileyo ngumntu onobhaliso.
I-Inhale Sigh, apho i-Inhale yindawo ehlukileyo yangaphakathi engena ngaphakathi kwimiphunga, kwaye Ukuncwina ngumthombo okhutshiwe wangaphakathi.
Ukusebenza okubonakalayo, apho iSpacacular iyintoni ebachukumisayo abanye, kwaye ukuSebenza kuyasebenza, kuzisa iziphumo ezilungileyo.
Ilitye Rocky, apho amatye agqunywe ngelitye, kunye neLitye ezenziwe ngelitye.
Ishishini kunye neshishini, apho iBusiness iyinto yonke edibene neshishini, kwayeShishini ngumntu ongazinzanga, onobuchule.
Indawo yokugcina impahla, apho iFoldable kuyo yonke into enokusongelwa, kunye neWarehouse kuyo yonke into enxulumene nendawo yokugcina iimpahla.
Icebo lobuchule-lobuchule, apho ubuchule-ngobuqhinga, kunye neqhinga -nxulumene neqhinga.
Nxiba, Nxiba indawo oza kuyinxiba, uze unxibe umntu.
Ukophula ukuqhawuka komtshato, apho ukuqhawuka konakalisa, ukukhubaza, kwaye ukuqhawuka kukuba nemvakalelo yokuqaqanjelwa emzimbeni.
Zazise ngokwakho, apho wazise khona, unike igama lakho, kwaye wazise ukuba uyafa.
Ukuyila- (master), apho kufuneka ufunde khona - ukwenza into iqondakale, kwaye uyilo-ukufunda uhlobo lobuchule.
Ukwahlula Ukwahlula, apho wahlula phakathi kokuqonda ngoncedo lweemvakalelo, kwaye Uhlule into kwinto okanye kwintsingiselo yomvuzo.
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,380.